Fumana iiMbono zaSimahla zeYouTube kunye nokuKhetha kweYou | 100% Inethiwekhi yasimahla
Thenga Amadoda okanye Owesibini I-Instagram iyakuthanda
Thenga iintengiso zePakethe ye-Instagram Marketing
Ngaba uyafuna ukuJongwa kwaSimahla kweYouTube kunye nokuthandwa?
Sebenzisa inkonzo yethu ngokukhawuleza kwaye ngokukhawuleza ikhule iimbono zakho ze-YouTube kunye nezinto ozithandayo! Eyona nto iphezulu, inkonzo yethu ikhululekile. Cofa iqhosha elingezantsi ukuze uqalise.
Unayo 1140 imbono ezintsha 3 min
UDana Jones wayithanda ividiyo yakho 2 min
UJimmie Sydney wayithanda ividiyo yakho 1 min
Kaori Ayane wayithanda ividiyo yakho 30 umzuzwana
Amanyathelo Alula Ukufumana Ukubukela Kokuzikhethela kunye nokuthandwa
Ukufumana iiNgxowa-mali ngokugqiba imisebenzi elula
Sebenzisa iiMali zakho zeeMali ukuze ukhuphule iiVideos zakho!
Kutheni le nto ndifanele ndisebenzise le mbono yasimahla ye-YouTube kunye nothando lwenethiwekhi?
Ukufumana ukuKwamkelwa kokuKhula okuNinzi
Ukujonga ngakumbi kunye nokuthanda onakho kwiividiyo zakho, kokukhona unokuqonda kunye nokukhula kwendalo okufumanayo. Abantu bathambekele ekunikezeleni ividiyo yakho ithuba ukuba sele inenani eliphezulu lokujonga kunye nokuthandwa.
Yandisa iYouTube kunye neZigaba zeNjini zoKhangelo zikaGoogle
Iimbono ezingaphezulu kunye nezinto ozithandayo, uphakamisa ividiyo yakho ibekwe kwii-YouTube kunye ne-Google's rankings rankings. Ukubekwa kweenjini eziphezulu kukufuna ukukhula okungakumbi kwendalo!
Yandisa ngokuzenzekelayo iiMbono zakho kunye nokuThanda imihla ngemihla
Iinkonzo zethu zikuvumela ukuba ufumane imbonakalo yemihla ngemihla kunye nezinto ozithandayo kumavidiyo akho. Iividiyo zakho ziya kufumana ukukhula okubonakalayo, okubonakalayo kwimihla ngemihla.
I-100% yokujonga simahla kwi-YouTube kunye nokuthandwa simahla kweYouTube
Masingakulibali ukuba oku phantse ukungazami nokuzenzekelayo kokukhula kweembono kunye nokuthandwa yi-100% yasimahla! Ngaba sisafuna ukuthetha ngaphezulu? Ingaba ulunde ntoni? Bhalisa namhlanje!
Ndifuna iZimvo eziSimahla kunye nokuThanda ngoku
Iimbono zikaYouTube kunye nokuthandwa kuya kunceda iiVidiyo zakho zibekwe ePhakamileyo kwiiYouTube nakwiZiphumo zoPhando zikaGoogle!
I-View2.be yenye ye-Intanethi ekhokelayo ye-YouTube yokujonga kunye nokuTshintsha iiNethiwekhi. Ingcamango ilula. Ubhalisela iakhawunti yasimahla, ufumana iingqekembe zemali ngokubukela iividiyo, ukuthanda iividiyo okanye ukugcwalisa izibonelelo kwaye emva koko uchitha ezo mali kwiividiyo zakho ukuqala ukwamkela Ukubukela kwi-YouTube no kuthandwa!
Ungathumela ukujonga kwi-YouTube kwaye uthanda amavidiyo amaninzi njengoko ungathanda! Ukuba unayo ividiyo ye-1 okanye ukuba unayo i-100, ufike kwindawo efanelekileyo.
Iividiyo zakho zifumana ukubukwa kwe-YouTube kunye nokuthandwa kwamanye ama-YouTubers kunye nenjongo efanayo engqondweni. Uya kufumana iindwendwe ezivela kumawaka abantu emhlabeni jikelele. Yindlela enhle yokukhaba-qalisa ukubukela kwevidiyo kunye nokuthandayo, namhlanje.
Ukuba ungenise ukuhlaziywa kwangempela, kuya kuboniswa ngezantsi ngeeyure ze-72. Ukubuyekezwa kogaxekile akuyi kupapashwa.
Ngo-Apr 11, 2019
Yithanda le website! Yinkonzo enhle yokufumana iimbono ze-YouTube kunye nokuthandayo. Siyabonga View2be!
Ingaba ulunde ntoni? Joyina amawaka abantu asebenzise i-View2be yonke imihla ukuba bafumane ukujonga kwe-YouTube kunye nokuthanda kwabo kumavidiyo abo!
Omnye ovela e-Australia uye wathengwa
Ababhalisi be-YouTube be-100
kwimizuzu 7 edlulileyo
Othile wase-Ukraine uye wathengwa
I-5000 Views ye-YouTube
kwimizuzu 12 edlulileyo
Omnye waseJamani uye wathengwa
IiHora zoKhuselo ze-YouTube
kwimizuzu 42 edlulileyo
Omnye waseKhanada uye wathengwa
Ababhalisi be-YouTube be-300
kwimizuzu 13 edlulileyo
Omnye waseArgentina uye wathengwa
Iingxoxo ze-YouTube ze-20
umzuzu 54 eyadlulayo
Omnye ovela eNgilani uye wathengwa
500 Twitch Abalandeli
iyure 1 edlule
Omnye ovela eBustern Kingdom uthenge
Ababhalisi be-YouTube be-1000
kwimizuzu 24 edlulileyo
Omnye ovela eUnited Kingdom uye wathengwa
I-1000 Views ye-YouTube
umzuzu 1 eyadlulayo
Sebenzisa inkonzo yethu ngokukhawuleza kwaye ngokukhawuleza ikhule iimbono zakho ze-YouTube, ukuthandwa, izimvo kunye nabhalisele! Eyona nto iphezulu, inkonzo yethu ikhululekile.
I-USA kunye ne-CAN: 888-881-9070
Imibuzo ye-301: Imfihlelo yokungahambisani nokuBala kwakho i-YouTube View Count
I-3 Zincinci ezincinci kwiiVidiyo eziNtsholongwane
Ukuhlahlamba kunye noMcebisi nge-YouTube Video Editor
Ividiyo kunye neVidiyo yeWebhu: Okufuneka Ukwazi
Iindlela ze-5 zokukhuthaza iSiteshi sakho ngaphandle kwe-YouTube